Nin weerar geystay oo Muqdisho lagu toogtay - Awdinle Online
Nin weerar geystay oo Muqdisho lagu toogtay
Warar dheeraad ah ayaa waxaa laga helayaa Bam gacmeed xalay lagu weeraray Bar Ciidamo ka tirsan dowladda Soomaaliya ku leeyihiin Isgoyska Howl-Wadaag ee Magaalada Muqdisho, weerarkaasi bambaano oo jugtiisa laga maqlay meelo kamid ah degmada Howl-Wadaag.
Goobjoogayaal ayaa waxaa ay sheegeen in mid kamid ah askarta dowladda uu toogasho ku dilay Ninkii weerarka bambaano geystay, waxaana la sheegay in weerarkaas ay ku dhaawacmeen hal Askari iyo laba qof oo Shacab ah.
Waxaa hakad laga dareemay isku socodka dadka iyo Gaadiidka Isgoyska Howl-Wadaag, xilliga uu weerarka bamaabno dhacay, hayeeshee markii dambe jawiga goobta uu noqday mid Caadi ah.
Mararka qaar ayaa waxaa weeraro bambaano lagu qaadaa Baraha Koontorool eek u yaal muqdisho iyo Xarumaha qaar ee Gobolka Banaadir, iyada oo aysan jirin dad loo qabtay falalkaas.
Previous articleMeydka Askari Al-Shabaab ka diiday inuu u tago oo lagu arkay Muqdisho
Next articleRW Rooble oo safar aan horay loo shaacin ku tegay Xerada Balli-Doogle